Chinhu chidiki chekubatanidza marobhoti ... | Linux Vakapindwa muropa
Imwe chete mhete yekuvatonga vese ... ndizvo zvauchazofunga paunenge uchiverenga zita racho. Zvakanaka, mune ino chiitiko chirongwa che robotics kugadzira diki diki iyo yakati kurei kupfuura € 2 mari asi inogona kuvabatanidza vese. Uye zvinouya kubva muruoko rwe Acutronic Robotic, kambani yakapihwa mari neDARPA uye Sony kuvhura yavo kifaa H-ROS SoM. Iyo Hardware inoita kuti modularity yemarobhoti ibvire.
Kana iwe ukatevera nyika ye robhoti zvakanyanya, iwe zvechokwadi unoziva musangano weROSCon 2018 uko dzimwe nhau dzechikamu uye zvakare IROS zvinoratidzwa. Zvakanaka, zviripo chaizvo izvo Acutronic Robotic yakafumura modularity yekutsvagisa marobhoti iyo yaive ichikudziridza makore maviri apfuura, uye ikozvino yapa yakagochwa. Kana iwe uri kushamisika kuti zvinei nechekuita nazvo ROS neLinux, Ini ndinokurudzira kuti iwe utsvage ruzivo nezvazvo uye iwe unzwisise ...
Zvakanaka, H-ROS iri ROS (Robhoti Inoshanda Sisitimu) kana robhoti inoshanda sisitimu pamwe ne Hardware. Izvo zvinouya kumusika mushure memakore maviri ekusimba kwakasimba, uye kuvandudzwa kwesoftware yayo yakaenzana uye zvigadzirwa zvehurdware izvo kambani yakagadzira kugadzira modular marobhoti. Unogona kufunga kuti modularity yaive yatove kugona, uye ichokwadi, asi nezvimwe zvipingaidzo. NaH-ROS SoM zvakadaro, iwe unozogona kuve ne modularity yakazvimiririra kune mutengesi wezvinhu, kuitira kuti zvese zvigoenderana pasina zvirambidzo
SoM inonyanya kurerutsa maitiro ekubatanidza modular marobhoti zvikamu, zvichideredza mutengo uye nguva kumusika. Izvi zvichapa kukurudzira kumabhizimusi emarobhoti uye zvichabatanidza marobhoti sezvatakambotaura, kubvira zvese zvikamu kubva kumarudzi ese evagadziri zvinogona kuchinjirwa kuchizvarwa ROSNdokunge, vachataura mune imwechete "mutauro" uye nekutaurirana kune mumwe nemumwe kuti vashande. Uye zvakare, iyo ichapa otomatiki inogadziridza, inomhanya-mhanyisa yekutaurirana bhazi (Gigabit Ethernet), kuwiriranisa uye Real-Nguva kugona neiyo chaiyo-nguva OS kana yakagadziriswa, yeindasitiri-giredhi ROS 2.0 kumisikidzwa.
MARA tsime rezita rokutanga, ndiro ruoko rwaunoona mumufananidzo mukuru wepositi uye ndiyo yekutanga modular yekudyidzana robhoti yakavakwa neH-ROS. Asi iwo unongova muenzaniso mumwe, mazhinji akawanda achauya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Chinhu chidiki chekubatanidza marobhoti ...